एसलाई गाभेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी सवा ९ अर्ब
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब २४ करोड नाघेको छ। अन्य बैंकहरुले ८ अर्ब पुर्याउनकै लागि कसरत गरिरहेका बेला इन्भेष्टमेन्टले भने चुक्ता पुँजी पुगिसक्दा पनि एस डेभलपमेन्टलाई आफूमा गाभी एकीकृत कारोबार थालेको छ।
आजदेखि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो।
एसलाई प्राप्ती गरेपछि बैंकमा संस्थापक पक्षको स्वामित्व ६९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३१ प्रतिशत कायम भएको छ। कुल निक्षेप १ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ भने कुल कर्जा १ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३. ९ प्रतिशत छ।
एसको १२ वटा शाखा तथा एउटा एक्स्टेन्सन काउन्टर थपिएसँगै बैंकको ६१ वटा शाखा र ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर भएका छन्। इन्भेष्टमेन्टमा गाभिएका एसका उपत्यकाका शाखाहरु नक्साल, न्यूरोड, चाबहिल, जावलाखेल, कौशलटार तथा कीर्तिपुरमा छन्।
त्यस्तै उपत्यका बाहिर लिंकरोड विरगंज, पर्साबजार चितवन, लायन्स चोक भरतपुर, उर्लाबारी मोरङ, खाँदबारी–१ संखुवसभा तथा विजुवार
प्यूठानमा अवस्थित छन्। एसको १२ वटा एटिएम थपिएपछि इन्भेष्टमेन्टको ए.टि.एम. संख्या ९८ वटा पुगेको छ। दुबै बैंकका शाखा तथा एटिएम अहिलेलाई जहाँको त्यही यथावत राखिएको छ।
तीन दशकको सेवा अवधिमा पाँच पटकसम्म ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड प्राप्त गरेको इन्भेष्टमेन्टले एसको प्राप्तिपछि अझ बृहत्तर रुपमा आफ्ना ग्राहक सेवालाई फैलाउदै लैजाने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २८, २०७४, ०५:३१:४४